निर्वाचन र गठबन्धन | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
यस वर्ष भएका र हुने निर्वाचनहरु र विभिन्न दल र व्यक्तिहरु बीच भएका गठबन्धनहरुको अन्तरतहमा नेपाल र नेपालीको स्वभाव र भविष्य देखिने छ । यद्यपि निर्वाचन आयोग, सरकार र दलहरुका अवाञ्छित क्रियाकलाप भनेर सन्चार माध्यमहरुमा निरन्तर आइरहेका छन् । साथै बाहुबली, गुण्डा, पैसा र पहुँच भएका गैर–राजनीतिक चरित्र भएका व्यक्ति भविष्यको राज्य सञ्चालनका प्रमुख पात्र हुनेछन् । यी आरोप पनि त्यत्तिकै लागेका वा लगाइएका होइनन् ।
आमसर्वसाधारणले जान्न बुझ्न सक्ने गरी भइरहेका घटनाक्रमहरुबाट यथार्थ तस्वीरका झलक देखिने गर्दछन् । निर्वाचनलाई असर पार्न सुरक्षा चुनौती पनि निरन्तर भइरहेका छन् । सेना प्रमुखबाट नै सैनिक हतियार सहित उत्रने भनी चेतावनी दिइ रहेका समाचारहरु भित्र गम्भीर सूचनाका आभाष पनि अनुभवमा आइरहेका छन् जुन असाधारण दूरगामी महत्वका हुन सक्ने छन् । त्यसरी विध्वंशक घटना हुनमा पनि पुरुषार्थ देख्ने र क्रान्तिकारी कार्य भनेर संस्कृति नै बनिसकेको छ । भूतकालका विविध पृष्ठभुमिहरुबाट पनि यस्ता गतिविधिले नै सामाजिक सम्मान, ऐश्वर्य, सत्ता रवाफ पाइन्छ भन्ने जबरजस्त मानसिकता बनेको छ । त्यो अकारण पनि होइन ।
जातिय मुद्दा उठाइए, त्यत्तिकै निस्तेज भए । त्यसै गरी क्षेत्रीयता पनि प्रबल ऐजेण्डा भएर प्रकट भइरहने त्यसमा अलगाववाद राष्ट्रियता माथि प्रहार अतिवादी गतिविधि भनेर परिभाषित गरिए पनि यो लामो संक्रमणकालिन अवस्थाको विस्तार देशप्रति बेवास्ता गर्दै भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, भागबण्डाको राजनीति, सत्ताको दुरुपयोग, सिद्धान्तहीन गठबन्धन यी यावत विषय हामी नेपाली भित्र गुम्सिएर रहेका भावना प्रकट हुने गरेका हुन् सायद यही हाम्रो स्वभाव हो ।
पटक पटक १० वर्ष भित्रै निरन्तर विविध प्रकृतिका आन्दोलन, परिवर्तन, निष्फल उपलब्धी विहीन परिणाम, सर्वसाधारणका पीडा जस्ताको तस्तै रहने हुनाले पराकाष्टामा पुग्न आझै समय लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
निर्वाचन जति खर्चिलो आमसर्व–
साधारणको पहुँच बाहिर गएपनि झण्डै १÷३ जनसंख्या विदेशमा दासत्वको जीवन विताउन बाध्य भएपनि यी सबका लागि कसैले कसैलाई दोष दिन सक्तैन । सबका सब यी कारकतत्वका लागि जिम्मेवार छौं । यो र त्यो भनेर उन्मुक्ति मिल्न सकिदैन । त्यसैले निर्वाचनको परिणाम जनताले चाहेकै आउला भन्नेमा पनि सन्देह छ । मतदाता शिक्षामा कमिले मत बदर बढी मात्रामा हुने निश्चित छ । वास्तविक प्रतिनिधित्व हुन्छ हुदैन त्यसको ठेगान छैन । विविध प्रकृतिका गठबन्धनबाट यस्तै होला भन्न कठीन छ । स्थानिय निकायहरुका चुनाव परिणामलाई आधारित मानि कुनै अन्दाज गर्नु र त्यसबाट एक्जीर पोल कल्पना गर्नुपनि वास्तविकता भन्दा निकै टाढा हुन सक्छ । गठबन्धन पनि कुनै सैद्धान्तिक धरातलमा भएको मान्न सकिदैन । बाबुरामले पनि पार्टी एकिकरण भनेर हातमा मुक्का बाधेकै हुन् तर आज तिनै व्यक्ति कांग्रेस समर्थनबाट गोर्खामा उम्मेदवार बने । यदि जनताले उनलाई मत दिएमा त्यसको पनि गहिरो अर्थ लाग्ने पक्का छ । जे जस्ता गठबन्धन बने पनि निर्वाचनमा जस्ता अनुहार हैसियत भएकाहरुले भाग लिएपनि पछि आउने परिणाम ऐतिहासिक दूरगामीको हुनेछ र संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको नारा दिने र विरोध गर्ने यादवका लागि परिणाम भने निरर्थक हुन सक्ने यथेष्ट आधार छन् ।
वाम गठबन्धन प्रजातन्त्र विरुद्ध भन्ने कांग्रेसीहरुका आवाज परिहासजनक लाग्दछन् । यदि यो गठबन्धन ठीक छ भनि आम सर्वसाधारणले निर्वाचनका माध्यमबाट विश्वास व्यक्त गरेमा त्यही त लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको आत्मा हो । कुन आस्था र विश्वासले जनमानसमा असर पर्छ त्यही लोकको अभिव्यक्ति हो । स्वयं विपक्षीहरु वि.पी., गणेशमान लगायतको प्रशंसा गर्दै रहेको सुनिन्छ । यद्यपि त्यो पनि देखावटी र चुनावी स्टट हुन सक्छ । आफ्नो विचार भावना प्रकट गर्नु एउटा विषय हो तर अर्काको तिरस्कार गरेर आफ्नो उत्थान देख्ने प्रवृत्ति घातक हुन सक्छ । झापाको चुनाव प्रचारले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । राम कार्की र कांग्रेसका नेता (सायद विश्व प्रकाश)ले परस्पर एक अर्का प्रति सम्मानजनक भाषा प्रयोग गरे ।
मधेशी नारा दिनेहरुमा आयाराम गयाराम पदवीको हानथाप एमालेलाई भगाउने नारा दिनेहरु उस्कै चुनाव चिन्हबाट भविष्य खोज्दै छन् । वर्तमानको परिणाम कालजयी दूरगामीको हुनेछ । यसमा कुनै शंका छैन । जसको जीत हार भएपनि सुनिश्चित भविष्य निर्धारण गर्नेछ । हाम्रा क्षमता, राष्ट्रियता वा स्वच्छन्दता बीचका परिक्षण पनि हुनेछन् । जो दलले जिते हारे पनि वा मिश्रित परिणाम आएपनि संविधान भने निरर्थक अल्पाउ हुने र नेपाल र नेपालीको हार अवश्य हुने देखिन्छ । आम सर्वसाधारणले विना हैसियतका मपाईहरुको पतन भने अवश्य कामना गरेका छौं ।
← किन चल्यो दश वर्षे जनयुद्ध ?
शरणार्थी जीवन ! →